Ilmahaagu ciyaari karo kulan si ay u bartaan Ingiriisi | USAHello | USAHello
Ilmahaagu ciyaari karo kulan si ay u bartaan Ingiriisi
Lingokids waa barnaamij af-barashada oo kuu ogolaanaya in ay carruurtu ku ciyaarto kulan si ay u bartaan Ingiriisi. Waxaa loo isticmaali karaa on casriga ah iyo kiniiniyada. Waxa uu ka caawiyay 9 milyan oo carruur adduunka oo dhan ku bartaan Ingiriisi. Baro sida aad ilmahaaga u isticmaali kartaa LingoKids for free.
Ma og tahay ilmaha kaas oo u dhexeeya 2 iyo 8 sano jir ah oo uu doonayo in uu barto Ingiriisi? USAHello iyo Lingokids way la siiyo fasalada si xor ah u soo galootiga iyo qaxootiga. Waxaan doonayaa in aan caawiyo carruurta aad u ogaato in ay bartaan Ingiriisi for free.
Times A si Lingokids ka mid ah kulan ay u bartaan Ingiriisi iyo sidoo kale heeso waxbarashada iyo videos gudahood app. Waxaa jira afar heer oo waxbarasho oo loogu talagalay carruurta da'doodu kala duwan tahay. Ilmahaaga ka baran kartaa mawduucyo kala duwan oo ay la app ka ciyaaro. Sidoo kale waxaa jira hawlo alifbeetada-barashada iyo casharada akhriska hore.
Waxaad ku caawin kartaa carruurtaada ama ay ku baran karaan on iyaga u gaar ah. Waalidiinta eegi kartaa warbixin todobaadle ah ee-app si aad u aragto waxa ay ilmaha ayaa ka shaqeeya. Waxaa jira bogag aad daabacan kartaa si qoyska oo dhan wada baran karaan.
Adiga iyo ilmahaaga isticmaali kartaa Lingokids ilaa dhamaadka 2019. Haddii aad u malaynayso in ilmahaaga macalinkiisa jeclaan lahaa in ay isticmaalaan Lingokids, fadlan soo jeedin ay email noogu. Waxa kale oo aad news this asxaabta iyo qoyska kuwaas oo waddanka u soo guurey wadaagi karaan, qaxootiga, iyo magangelyo doone. Waxaan iyaga siin doonaa helitaanka lacag la'aan ah, aad.
Waayo, helitaanka lacag la'aan ah, email noogu at info@usahello.org. Waxaan kuu soo diri doonaa set oo ah tilmaamaha iyo code a in la isticmaalo. Waxaan leenahay tilmaamaha lagu turjumay luqado badan. Haddii aad rabto in tilmaamaha lagu tarjumay, fadlan weydii.
maskaxda laba luqadood